तलब पाएनन् परदेशीले, आफ्नो भन्दा घर परिवारको चिन्ता बढी ! – Khabarhouse
तलब पाएनन् परदेशीले, आफ्नो भन्दा घर परिवारको चिन्ता बढी !
Khabar house | ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार १५:३७ | Comments
काठमाण्डौ : आफ्नै देशमा त समयमा तलब नआउँदा कति धेरै चिन्ता हुन्छ, झन् परदेशमा के होला? साउदीमा धादिङका सुनिल गुरुङलाई पनि यस्तै भएको छ । मोबाइलमा तलब आएको नोटिफिकेसनको घण्टी सुन्न नपाएको दुई महिना भइसक्यो । कहिलेकाहीँ मोबाइलमा अरु नै नोटिफिकेसन आउँदा उहाँलाई लाग्छ, अब त पक्कै कम्पनीले तलब हालिदिएछ । तर उहाँको आशा सेकेण्डभरमै निराशामा परिणत हुन्छ ।
लकडाउन हुनेबित्तिकै बन्द भएको थियो सुनिलले काम गर्ने कम्पनी । ‘फेब्रुअरी महिनाको तलब पनि आएको थिएन, अब त मार्च महिनाको तलब आउनुपर्ने दिन गुज्रिसक्यो’ तलब आउने दिन कुरेर बसेको दुई महिना भइ सक्दा पनि तलब आउने हो नआउने हो उहाँ अन्यौलमा हुनुहुन्छ, ‘काम गरेको महिनाको तलब त आएन, अप्रिलमा त काम नै भएन के आउला र खै ।’
कम्पनीले पनि कुनै जानकारी नदिएको उहाँ बताउनु हुन्छ । म्यानेजरलाई सोध्दा लकडाउनले गर्दा ढिलो भएको भनेको छ । साथमा भएको पैसा पनि सकिन लाग्यो, अब के खाने कहाँ बस्ने उहाँलाई चिन्ता थपिएको छ। यस्तै कुबेतबाट विष्णुप्रसाद न्यौपानेको पीडा पनि उस्तै छ । उहाँ काम बन्द भएर कोठामै बस्दै आएको ४३ दिन भयो । लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भिसाको म्याद सकिएर उहाँ कोठामै बस्दै आउनुभएको थियो ।
लकडाउनपछि झन् कम्पनी नै बन्द भयो । अर्काको देशमा यति लामो समयसम्म तलब नपाउँदा खानेबस्ने समस्या बढ्दै गएको छ । आफू लगायत अरु १२ जना नेपाली तलब नपाएर कोठामै बसिरहेको उहाँको भनाइ छ । आफू जस्तै बेतलबी भएर बसेका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल सरकारले उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउला भन्ने आशामा आफूहरु बसेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
खाडी लगायत विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु अहिले को;रोना सङ्क्रमणका कारण निकै प्रभावित भएका छन् । कसैलाई यस्तो अवस्थामा पनि काममा खटिनु परेको छ भने कसैलाई लामो समयदेखि तलब नपाएउँदा के खाने कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । मलेसिया पनि अहिले लकडाउनमा छ । सङ्क्रमण फैलिने जो’खिमलाई मध्यनजर गर्दै मलेसियाले अप्रिल २८ सम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ ।
यस्तै लकडाउनका कारण कतिपय कम्पनीहरुले आफ्ना कामदार कटौती गरिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुमा पर्न गएको छ । यसै कारण कति श्रमिकहरुको रोजगारी पनि गुमेको छ। ‘कतिको रोजगारी गुमेको छ भने कतिलाई थोरै तलब दिएर राखेको छ, यस्तै कतिलाई बेतलबी बिदामा बस्न भनेको छ’, यस्तो बेला सरकारको केही दायित्व हुन्छ कि हुँदैन भनेर यूएईबाट रिता राई प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘अर्काको देशमा बिनातलब कसरी बस्ने होला ?’
कतारमा एउटा कम्पनीमा कार्यरत मनोज जिसी महिनाभरी काम गरेर पनि तलब बुझ्ने बेला २० प्रतिशत काटिएर आएकोमा दुखित हुनुहुन्छ । पहिलेको जति काम गर्नु नपरे पनि समस्याको बेला आफ्नो तलब काटेकोमा उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। ‘जति काम गराए नि हामी त गरिरहेकै थियौं नि, एकहप्ता कम काम भयो भन्दैमा यसरी तलब नै काट्नुपर्छ र ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
आम्दानीको बाटो केही नभए पछि परिवारको साँझ, बिहानको छाक टार्नकै लागि पनि रोजगारीको लागि परदेशिनेहरु धेरै छन् । यस्तोमा आफू कार्यरत कम्पनीबाट तलब नपाउँदा आफ्नो परिवारको के हालत भयो होला भन्ने चिन्ता थपिएको छ, धेरै श्रमिकहरुमा । विस्तृतमा उज्यालो अनलाईनमा खबर छ ।